Linux Semplice: fanoloana ny Crunchbang? | Avy amin'ny Linux
Mahalana aho no liana amin'ny fizarana minimalist, na ny tena izy, izay tonga amin'ny alalàn'ny Mpitantana varavarankely hitantana ny birao.
Tamin'io fotoana io rehefa nampiasaiko OpenBox + Tint nanjary hadino. Na izany aza, tsy mitsahatra ny mamantatra aho fa mpampiasa maro no mahazatra an'io karazana fikirakirana io ary ohatra tsara indrindra anananay miaraka amin'ny Community of Crunchbang (izay tamin'ny farany dia tsy hitako mihitsy hoe nofoanana na nitohy ilay tetikasa).
Ny tiana holazaina dia hoe rehefa nitety ireo tambajotra sosialy izay matetika aho, dia nahita fakana sary mizara fizarana vaovao antsoina hoe italiana nantsoina Semplice LinuxEny, nilaza izy ireo fa ny te hahafanta-javatra dia namono ny saka. Mba hahitana fotsiny fa "nanome antsika" fizarana hafa izy io, dia nampidina azy aho, nametraka azy, nanandrana ary izao aho dia manome anao famerenana kely
1 Fametrahana Semplice Linux
2 Midira ao amin'ny Semplice
3 Inona no hitantsika ao amin'ny Semplice?
Fametrahana Semplice Linux
Semplice Linux ampiasao ho toy ny fototra Debian Tsy milamina (Manoro hevitra izy ireo), ary misy dikanteny ho an'ny 32 sy 64 bit. Izy io dia azo apetraka amin'ny tsato-kazo USB amin'ny alàlan'ny baiko dd
Mazava ho azy fa tsy maintsy ovain'izy ireo ny làlana misy ny ISO sy ny anaran'ny fitaovana voalaza ao hoe sdX
rehefa nandroaka izahay amin'ny fahatsiarovana dia manana safidy hiditra amin'ny LiveCD na handefa mivantana ny installer isika, toa ahy.
Ary hitantsika ny teboka voalohany misy fahasamihafana: Tsy mampiasa ilay installer Debian mahazatra aho. Ankehitriny dia manohy manaraka ny dian'ny wizard fametrahana izahay.
Misafidy ny fiteninay izahay, izay tsy hampiasaina amin'ny fametrahana azy (izay amin'ny teny Anglisy foana), fa ho an'ny toerana misy anay.
Misafidy ny lamina fitendry aminay izao izahay. Mampiasa teny anglisy iraisam-pirenena foana miaraka amin'ny lakile maty aho, satria amin'ny teny anglisy ny keyboard-ko ary amin'ity fomba ity dia azoko atao ny mametraka ny Ñ miaraka amin'ilay fitambarana AltDer + N.
Misafidy ny faritry ny fotoananay izahay.
Manamboatra ny solonanarana, tenimiafinay ary ny anaran'ny ekipanay izahay. Azontsika atao ihany koa ny mampihetsika ny kaonty faka, satria raha tsy izany dia tsy maintsy mampiasa sudo isika.
Izao no ampahany sarotra indrindra amin'ny fametrahana: Disition partitioning. Raha ny amiko, satria milina virtoaly izy io, satria nisafidy ny safidy voalohany aho, mba hampisarahan'ny Semplice ny toerana natokana araka izay itiavany azy.
Raha tsy hainao ny manavaka ny kapila mafy, na tsy manana ny fampirimana ny mombamomba anao ianao, mangataha fanampiana na tsy manao na inona na inona fotsiny dia avereno indray ny solosaina ary faly tokoa
Tamin'ny farany dia toy izao ny fizarazarana:
Avy eo mangataka antsika hametraka (raha mila) GRUB isika:
Ny dingana manaraka dia tena mitovy amin'ny zavatra hitantsika ao Antergos y no teboka fahasamihafana faharoa. Raha ny marina dia zavatra tiako be izy io, satria manome zavatra betsaka ho an'ny mpampiasa. Raha maniry isika dia afaka mandingana an'io dingana io satria efa nametraka indray mandeha dia afaka mandefa io mpamosavy io indray isika.
Anjaranao izao manamarina fa izay rehetra nataontsika teo aloha dia araka ny tokony ho izy.
Ary raha milamina ny zava-drehetra dia manomboka mametraka isika ..
Midira ao amin'ny Semplice
Mamerina ny solosaina izahay ary mahita ny mpitantana ny fivoriana avy amin'ny LightDM.
Napetrakay ny tenimiafinay ary hitanay ny teboka fahasamihafana fahatelo: Tsotra kokoa Atombohy amin'ny mpanampy iray izay mampianatra anay mampiasa azy amin'ny fomba tena intuitive ny fotoana. Milaza amintsika fotsiny izy hoe: Hanombohana, tsindrio havanana na aiza na aiza eo amin'ny birao.
Tena tsara! Nianaranao ny fomba hanokafana ny menio lehibe an'ny Semplice, ankehitriny, kitiho ny zavatra rehetra amin'ny klavier:
ary tonga ho azy dia mahazo karazana Launcher izay, miankina amin'ny zavatra soratantsika, dia haneho valiny hafa amintsika. Ary arahabaina! Afaka mampiasa Semplice ianao izao ..
Inona no hitantsika ao amin'ny Semplice?
Ny zavatra ratsy ho ahy (maso, izay nolazaiko ho ahy) amin'ity karazana fizarana sy fikirakirana ity dia amin'ny farany dia tsy maintsy maty miaraka amin'ireo fampiharana an'ny tontolo Desktop lehibe isika. Izany no mahatonga antsika ao amin'ny Semplice mahita fampiharana avy amin'ny LXDE, GNOME, XFCE na zavatra hafa rehetra izay GTK.
Mazava ho azy, mandeha haingana be ny zava-drehetra, saingy manomboka amin'ny 300MB ny rafitra, izany hoe, aza mieritreritra fa amin'ny alàlan'ny fampiasana Openbox miaraka amin'ny Tint2 ho takelaka dia hanomboka amin'ny 60MB .. Oh, manina ny fahantrako ny 60MB aho manomboka amin'ny XFCE ary Debian 😀
Anisan'ireo rindranasa ananantsika amin'ny maha-fitetezana azy Iceweasel, Mailaka claws amin'ny maha mpanjifa mailaka anao ary ROXTerm ho toy ny terminal ho an'ny mpampiasa. Ho an'ny famerenana mozika dia miaraka izy io Pragha, izay tsy fantatro sy nilalao horonantsary ho GNOME Mplayer. Mitandrema amin'ny kodiaran'ny totozy, satria mamindra antsika amin'ny latabatra 4 izy.
Amin'ny lafiny iray, Tsotra kokoa misy fitaovana hanamboarana ny tontonana an-tsary.
Ary araka ny hitanao, na dia eo aza ny fizarana tsotra dia tsotra, mamela antsika hanana safidy maro tsy hitantsika amin'ireo lehibe kokoa. Tsotra kokoa Natao ho tsotra nefa mora ampiasaina izy ary heveriko fa mahatratra ny tanjony tsara izany, miampy ny fahitana azy tsara fotsiny manomboka azy io.
Tonga miaraka Kernel 3.19, Systemd y Pulseaudio amin'ny maha mpizara audio azy. Izy io dia misy fitaovana hafa mety mety na mety tsy hahasoa ny maro, na dia mila bebe kokoa aza isika dia afaka misintona Synaptic ary mametraka izay rehetra alaina ao amin'ny Repositories Debian.
Ny lohahevitra kisary izay tonga amin'ny toerana misy anao dia antsoina Faba, ary nantsoina ny lohahevitra GTK Zukitre-vera. Ho an'ny solaitrabe dia ampiasao fampiharana antsoina Clipit izay azo ovaina ho ahy.
Ny fahatsapana nomeny ahy, toy izany ihany ary ao anatin'ny minitra vitsy fanandramana, dia mety ho safidy tsara ho an'ny solosaina manana loharano maotina izany. Azonao atao ny misintona azy avy ao amin'ny tranonkalany ary manandrana azy manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Linux Semplice: fanoloana ny Crunchbang?
Marenina dia hoy izy:
Crunchbang dia debian stable, debian ity tsy milamina (tsy fitsapana akory). Tsy safidy hafa io, satria mety hianjera (ary hianjera) rehefa manavao.
Mamaly an'i Sord
Misaotra ny fizarana! toa vaovao sy mahaliana!
Ny fitomboan'ny fihinanana RAM dia toa tsy azo ihodivirana. Ao amin'ny solosaina finday 11 taona, Debian Wheezy + KDE, kinova 32-bit, dia 170 Mb fotsiny; amin'ny solosaina iray ihany ary miaraka amin'ireo safidin'ny mpampiasa azy ihany, Sparky Linux (Debian Sid nohaikitra) + KDE, 32 bits ihany koa, 230 Mb.
Tamin'ny farany dia nanova ny KDE ho lasa MATE aho, saingy tsy afaka nahazo izany ambanin'ny 170 Mb tamin'ny voalohany. Farafaharatsiny mba nahitako mitahiry manodidina ny 60 Mb, izay ho an'ny solosaina manana RAM 512 Mb dia mitahiry vola be.
Angamba Semplice manaporofo, na angamba Siduction LXQt, fa ny Siduction dia tsara foana nanitsy ny fanjifana RAM.
atsaharo dia hoy izy:
Ho an'ny fanjifanjana dia tsy nampiasa afa-tsy ny mpitantana ny varavarankely aho, mba ho marimarina kokoa, icewm eo anelanelan'ny 16 sy 32 mbs ny fanjifana ee
Mamaly an'i ceso
Toa an'i Antergos ... mampiahiahy izany.
Tamin'ny farany dia maty tokoa i Crunchbang, fa ny disto hafa kosa toa nanandrana namelona azy tamin'ny fombany ihany, ny sasany nankany amin'ny sampana Jessie, ny sasany nijanona niaraka tamin'ny Wheezy. Ny tetikasa manan-danja indrindra dia ny BunsenLabs 🙂
Mikasika ny Semplice, dia toa tsara izany, nanana hevitra tsara ry zareo, heveriko fa ny fampidirana ny birao sy ny fomba fampiasana no ilain'ny olom-baovao tsy ho very amin'ny tontolo misy azy toa ny Gnome na Openbox, izay ireo no manana ny fahasamihafana indrindra momba ny interface Windows.
Marcos_tux dia hoy izy:
Debian tsy milamina? Nandalo…
Valio i Marcos_tux
Teboka iray: Semplice dia fizarana GNU / Linux izay navoaka tamin'ny 2010, miorina amin'ny 'tsy milamina' an'i Debian. Noho izany, ary raha tehirizina ny fahasamihafana amin'ny fivoaran'ny Debian iorenan'izy ireo, dia antitra noho i Crunchbang izany. Mampalahelo fa very i Semplice teny an-dalana very ny iray amin'ireo sary linux tsara indrindra, dia ilay an'ny penguin nipetraka ary voahodidin'ny boribory nitaratra.
crunchbanger dia hoy izy:
Fahafantarana. Ny tena marina an'ny CB dia CrunchBang Linux 8.10.01, miorina amin'ny Ubuntu ary daty nanomboka tamin'ny Novambra 2008.
Mamaly amin'ny crunchbanger
Izaho izao dia mihazakazaka Funtoo (miaraka amin'ny OpenRC) + Openbox mihazakazaka miaraka amin'i Compton, Tint2, Pulseaudio ary tsy mampiasa Consolekit (antitra sy tsy misy fikojakojana) miaraka amina RAM 90 Mb fotsiny eo am-piandohana.
Ary nifikitra tamin'i Debian Jessie aho, niaraka tamin'ny XFCE, tsy nanana Consolekit sy RAM misy boot 300 MB (toy ny derivative resahinao). Tsy handiso fanantenana anao, fa mijanona miaraka amin'i Debian RC aho ary miorim-paka mandra-pivoaky ny sampana miorina toy ny nataon'i Jessie.
Efa ela aho no nampiasa an'i Debian, ny Debian miaraka amin'ny SystemD dia tsy tena ratsy mihintsy, ny zavatra tsy tiako dia ny fomba itondrana zavatra sasany ao amin'ny SystemD, ka nisafidy ny hiverina any Funtoo aho, ary tsy izany mimenomenona, vao izao aho manana test VM roa, ao anatin'izany ny Debian Stable hanao fitsapana miaraka amin'ny OpenCart sy Magento ary na eo aza ny zava-drehetra ananako ao amin'ny Funtoo dia tsy mbola nandany RAM mihoatra ny 1,5 GB aho raha tsy hoe manangona Firefox sy IcedTea.
7.0.1 dia efa andro maromaro izay misy fanitsiana vitsivitsy raha oharina amin'ny 7.0
Victor R. dia hoy izy:
Tsara ho an'ny fampitandremana Yoyo 😉
Valiny tamin'i Victor R.
Eny, hojereko io distro io. Hapetrako izy hahitako hoe milamina sy voadio izy.
Ho solon'ny Crunchbang, heveriko fa tsy hisy hafa hitovy aminy hehe. Izy io dia distro voalamina tsara sy voavoatra izay nanidina toy ny volom-borona (ary matotra izany).
(cmsv20) Cesar Silva dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, tsy nahalala ny distro; na izany aza dia hitako fa mandany be loatra mba ho minimalist na maivana. Andramo ny Lubuntu 13.10, heveriko fa io no tsy nanana fanjifana RAM farafahakeliny, nampiditra ny rafitra tamin'ny 60MiB.
Valiny (cmsv20) Cesar Silva
Efa nanandrana aho, tsy ratsy izany, saingy tsy maharesy lahatra ahy ireo mpitantana varavarankely ireo, tsotra loatra izy ireo, ary raha tsy manana PC efa antitra ianao dia tsara kokoa ny mitady zavatra feno kokoa. Ho an'ny maivana dia aleoko ny LXDE
Edgar sierra dia hoy izy:
Nanandrana aho ary tiako ilay izy, afa-tsy ny tsy nahitako ny menio, satria tsy mandeha ny menio ary tsy manomboka ny compton hatramin'ny voalohany .. Nefa mbola ilay! # No tsara indrindra tamin'ny fanjifana loharano vitsivitsy
Mamaly an'i Edgar sierra
Ronin dia hoy izy:
Eny, toa tsara be izany distro indray andro any, hojereko izy satria manana solosaina finday kely maniry fatratra toy izany aho ... eny an-dàlana ho an'ireo olona izay tsy afaka manadino ilay crunchbang taloha dia misy tetik'asa eo amin'ny fiarahamonina manandrana. hamelombelona azy dia antsoina hoe crunchbang ++ https://crunchbangplusplus.org/ izay ao amin'ny dingana beta ary na dia manana sary 32-bit aza izy io, dia andrasana tsy ho ela ny kinova ho an'ny 64
Valiny tamin'i Ronin
Tiako io takelaka io
Archbang dia mbola ao anaty banga ary maivana be, saingy aza adino fa tsy OS irery ny fiafarany, fa fitaovana iray, tsy dia ilaina loatra ny manomboka amin'ny latsaky ny 100MB raha toa ka mikasa ny hanokatra tabila-tranonkala 6 izahay , mihaino mozika ary miasa miaraka amina antontan-taratasy.
GNU / Linux dia nanome fiainana be dia be amin'ireo solosaina tsy dia matanjaka loatra, saingy tsy maintsy hosokafana ny banga, izao Systemd sy Wayland dia hanamora ny fiainantsika eo amin'ny birao, saingy tsy hitsitsy amin'ny fanjifana fitaovana.